भारतमा फेरि बढ्न थाले कोभिड बिरामी
एजेन्सी, १७ आषाढ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाबाट दैनिक संक्रमित हुने मानिसको संख्या पुन: बढ्न थालेको छ । बिहीबार भारतमा ४८ हजार ७८६ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै उक्त अवधिमा १ हजार ५ जनाको मृ...
sajhapost.com . ४ महीना अघि पूरा समाचार पढनुहोस
महोत्तरी, १७ असार । मध्य असारसँगै लगातारको वर्षाले महोत्तरी जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण अलि मत्थर भएर काममा निस्कने तयारीमा लागेका किसानलाई गत मङ्गलबार रातिदेखि लगातार पर...
सिन्धुपाल्चोक, १७ आषाढ । निरन्तरको वर्षाले मेलम्ची खोलाको बहाव बढेको छ । केही दिन अघिमात्र वितण्डा मच्चाएको मेलम्ची खोलाले फेरि पनि स्थानीयवासीलाई त्रसित बनाएको छ । बुधबार दिउँसोदेखि निरन्तर परेको...
आजदेखि आन्तरिक हवाइ उडान खुल्यो
काठमाडौं, १७ आषाढ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि स्थगन गरिएको मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान झण्डै दुई महिनाको अन्तरालपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले आन्...
तनहुँमा पहिरोमा परी दुईको मृत्यु, तीन जना घाइते
तनहुँ, १७ आषाढ । बन्दीपुर गाउँपालिका–३ तामुङमा पहिरोले दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा परी एक गम्भीरसहित तीन जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोबाट तामुङका करिब ३० वर्षीया सरस्वती थापा र ७०...
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले क्षुद्रग्रह दिवस आज विभिन्‍न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै छ । विश्‍वका विभिन्‍न देशमा सन् २०१५ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् २०१६ मा संयुक्त...
लगातारको भारी वर्षापछि पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग पनि ठाउँठाउँमा अवरुद्ध
तनहुँ, १७ असार । अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग ठाउँठाउँमा अवरुद्ध भएको छ । तनहुँको पूर्वी नाका आँबुखैरेनीदेखि पश्चिम नाका कोत्रेसम्मको करीब ७२ किलोमिटर दूरी पर्ने राजमार्गको ठाउँठाउँम...
राष्‍ट्रियसभाको आठौं अधिवेशन आजदेखि सुरु
काठमाडौं, १७ असार । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ९३ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सिफार...
आजदेखि आन्तरिक उडान सुचारु हुँदै, दैनिक ६७ उडान हुने
काठमाडौं, १७ असार । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढेपछि झण्डै २ महिनादेखि रोकिएका आन्तरिक हवाई उडानहरु आजदेखि सुचारु हुँदै छन् । गत वैशाख २० गतेदेखि रोकिएको आन्तरिक उडान बिहीबारदेखि सञ्‍चालन...
पहिरोले मुग्लिङ-नारायणगढ सडकखण्ड अवरुद्ध
चितवन, १७ असार । चितवनको मुग्लिङ-नारायणगढ सडकखण्डमा आज विहान पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ पाँचकिलोमा माथिबाट पहिरो खसी सडक दुईतर्फी अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार...
पूर्वमाओवादी नेताहरु बहुदलीय जनवाद मानेर एमालेमा नबस्‍ने !
काठमाडौं, १७ असार । नेकपा एमालेको विवाद झन् पछि झन् बढदै जान थालेपछि एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरु बिचल्लीमा परेका छन् । माओवादी केन्द्रमा राम्रो हैसियत भएका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, ...
गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारलाई दुई करोडको बजेट
पोखरा, १७ असार । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पत्रकारको हकहितका लागि आफू सधैं प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा मुख्यमन्त्री...
बिहिबार सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानमा वर्षा हुने
काठमाडौं, १७ असार । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको सक्रिय प्रभाव रहेको छ । हाल देशको तराई भू-भाग नजिक मनसुनी न्युन चापिय रेखा (monsoon trough) रहेको छ । अहिले देशभर सामा...
म्याग्दीमा जीप दुर्घटना हुँदा बालकसहित दुईको ज्यान गयो, ६ घाइते
म्याग्दी, १७ असार । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका २ नेवारेखोलामा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ । सदरमुकाम बेनीबाट मङ्गलाकै पूर्णगाउँतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको...
कुशल र ज्ञानेन्द्रको टी-२० वरियतामा सुधार
काठमाडौं, १६ असार । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य कुशल भुर्तेल र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको टी-२० अन्तर्राष्‍ट्रिय वरियतामा सुधार आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले जारी गरे...
काठमाडौं, १६ आषाढ । उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रहेको धितोपत्र बजारमा आज विकास बैंक र वित्त उपसमूहका शेयरमा आकर्षण देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार पोखरा फाइनान्सको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लाग...
यी हुन् कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित २० मुलुक
एजेन्सी, १६ आषाढ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा सङ्क्रमितको संख्या १८ करोड १८ लाख ५६ हजार ८०८ जना रहेका छन् । कोरोना शुरु भएयता हालसम्म विश्वभर यस सङ्क्रमणबाट...
एजेन्सी, १६ आषाढ । संयुक्तराज्य अमेरिकाको फ्लोरिडामा भत्किएको एउटा भवनमा च्यापिएर मृत्यु हुनेको संख्या १२ जना पुगेको छ । मियामी–डेड काउन्टीका मेयर डानिएला लिभाइन काभाका अनुसार भवनको भग्नावशेषमा पु...
काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ८ हजार ५ सय
काठमाडौं, १६ असार । बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा ५७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये काठमाडौंमा ३३६, ललितपुरमा १८९ र भक्तपुरमा ४७ जनामा संक...
काठमाडौं, १६ आषाढ । काठमाडौंको बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधानले आफूलाई षडयन्त्र गरी थुनेको भन्दै रुपा सुनारविरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । प्रधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आज उजुरी दिएकी हुन् । प्रध...
किमले कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै कैयौं वरिष्ठ अधिकारी हटाए
एजेन्सी, १६ आषाढ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले पार्टीका वरिष्ठ अधिकारीहरुको आलोचना गरेका छन् । कोभिड-१९ महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा विफल भएको भन्दै किमले कैयौं वरिष्ठ अधिकारीलाई हटाएको समेत ...
भारत सरकार र ट्विटरबीच जारी विवाद थप चर्कियो
एजेन्सी, १६ आषाढ । भारत सरकार र माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरबीचको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । भारतीय प्रहरीले बाल अश्लील सामग्री (child pornography) लाई बढावा दिएको भन्दै ट्विटरविरुद्ध नयाँ मुद्दा गरे...
पछिल्लो २४ घण्टामा २८ सय भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडाैं, १६ असार । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २८ सय भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २८९२ जनामा संक्रमण देखिएको हो । ११ हजार...
बढी भाडा लिने आठ जना पक्राउ
काठमाडाैं, १६ असार । ट्राफिक प्रहरीले यात्रुसँग तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले यात्रुसँग बढी भाड...
संघीय संसदका कर्मचारीले परिवारका सदस्यलाई खोप लाउन ल्याएपछि…
काठमाडाैं, १६ असार । संघीय संसदका सांसद तथा कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ । बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा यसअघि खोप नलाएकालाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा र यसअघि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात...
काठमाडाैं, १६ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार ...
एजेन्सी, १६ आषाढ । अमेरिकाको एक अनुसन्धान केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणले अधिकांश भारतीयहरु फरक धर्म मान्ने मानिससँग विहे गर्न नहुने पक्षमा रहेको देखाउँछ । अमेरिकी थिङ्कट्याङ्क प्यु रिसर्च सेन्टरको सर...
काठमाडौँ, १६ असार । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको आठौँ अधिवेशन बिहीबारदेखि शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ९३ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का ...
काठमाडाैं, १६ असार । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाध...
भारतमा कोभिड-१९: बुधबार दैनिक संक्रमितको संख्यामा केही वृद्धि
एजेन्सी, १६ आषाढ । छिमेकी मुलुक भारतमा बुधबार कोरोनाका दैनिक संक्रमितको संख्या केही बढेको छ । त्यहाँ हिजो ३७ हजार ५६६ जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै १०२ दिनपछि दैनिक संक्रमितको संख्या घटेर ४० हजार मुनि...
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सरकारी वकिलका बहस सकियो
काठमाडौँ, १६ असार । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको प्रतिरक्षामा बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्याय...
सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा हुदैंछ कारोबार ?
काठमाडौं, १६ असार । बुधबार सुनको मूल्य ६०० रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार सुन प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला एक सय रुपैयाँले घटेर ९...
क्यानाडा र अमेरिकामा अत्यधिक गर्मी, ६० भन्दा बढीको मृत्यु
एजेन्सी, १६ असार । क्यानडाको दक्षिणी प्यासिफिक नर्थवेष्ट क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दा मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । ब्रिटिश कोलम्बियास्थित प्रहरीले सोमवार यता मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६० नाघेको जनाएको छ । ...
मकवानपुर, १६ असार । आज बिहानदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध बनेको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका—६ देउराली र गढीमा आएको पहिरोले आज बिहानैदेखि सो सडकख...
मानिस स्वस्थ रहनका लागि स्वास्थ्यवर्द्धक खानेकुराको पनि महत्व हुन्छ । विशेषज्ञका अनुसार खानपिनमा प्रोटिनले भरिपूर्ण खानेकुराहरु खानु उपयुक्त हुन्छ । प्रोटिनको मद्दतले शरीरमा ऊर्जाको स्तर कायम रहन्...
लोकसेवा आयोगका रोकिएका परीक्षा साउन १५ देखि
काठमाडौं, १६ असार । लोकसेवा आयोगले कोरोना महामारीका कारण रोकिएका परीक्षाहरु साउन १५ गतेदेखि सञ्‍चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले रोकिएका परीक्षाहरु साउन १५ देखि असोज २५ गतेसम्...
युरोकप फुटबल: कोको भिड्दैछन् त सेमिफाइनल पुग्‍न ?
काठमाडौं, १६ असार । युरोपका विभिन्‍न सहरहरुमा जारी १६औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा क्‍वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । गएराति प्रिक्‍वाटरफाइनलका अन्तिम दुई खेल सकिएसँगै अन्तिम आठ टोलीको टुङ्गो लागेको ह...
देशका अधिकांश स्थानमा विहानैदेखि वर्षा, केही दिन ठूलो पानी पर्ने सम्भावना
काठमाडौं, १६ असार । मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर मनसुनी वायुको सक्रिय प्रभाव रहेको छ । हाल देशको तराई भू-भाग नजिक मनसुनी न्युन चापिय रेखा (monsoon trough) रहेको छ । अहिले देशभर सामा...
वेस्टइन्डिजविरुद्धको तेस्रो टी-२० मा दक्षिण अफ्रिकाको रोमाञ्‍चक जीत
काठमाडौं, १६ असार । वेस्टइन्डिज भ्रमणमा रहेको दक्षिण अफ्रिका क्रिकेट टोलीले तेस्रो टी-२० मा रोमाञ्‍चक जीत हासिल गरेको छ । राति सम्पन्‍न खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले वेस्ट इन्डिजलाई १ रनले हराएको हो । दक...